यसरी घट्छ मानिसको आयु, आयु लम्ब्याउन सेक्सको कति प्रतिशत भूमिका ? | Rajmarga
यसरी घट्छ मानिसको आयु, आयु लम्ब्याउन सेक्सको कति प्रतिशत भूमिका ?
लामो आयुको चाहना सबैलाई हुने गर्दछ । तर, दैनिक जीवनमा हामी केही यस्ता काम गर्दछौ, जसले हाम्रो जीवनको केही घण्टा, केही दिन वा केही वर्ष कम हुँदै जाने गर्दछ । कतै तपाई पनि त्यसै त गरिरहनु भएको छैन ?
यो सही हो कि तपाईलाई कामबाट विदा आवश्यक छ । ताकि तपाईको शरीरले आराम प्राप्त गर्न सकोस् । तर, धेरै आराम पनि हानिकारक हुन सक्दछ । कामपछि अचानक लामो समयसम्म आरामले इम्युन सिस्टमलाई कमजोर बनाउने गर्दछ ।
ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार जुन पुरुष महिनामा कम्तीमा एक पटक सेक्स गर्दछन्, त्यस्ता पुरुषको मृत्युको खतरा हप्तामा एकपटक मात्र सेक्स गर्ने पुरुषको तुलनामा दुई गुना बढी हुने गर्दछ ।
सुत्नु शरीरका लागि जरुरी छ । तर बढी सुत्नुले पनि उमेर घटाउने काम गर्दछ । आठ घण्टाभन्दा बढी ओछ्यानमा सुतिरहनुले फाइदा कम हानी बढी पुराउने गर्दछ । त्यसैले नियमित रुपमा सुत्नुस्, तर आठ घण्टाभन्दा बढी भने होइन है ।
के तपाई कार्यालयमा कयौ घण्टा बसेर काम गर्नु पर्दछ ? जामा इन्टरनल मेडिसिनको अध्ययनअनुसार दिनमा ११ घण्टा बसेर काम गर्दा मृत्युको खतरा ४० प्रतिशत बढ्ने गर्दछ । त्यसैले कामको बिचबिचमा ब्रेक लिनुस् । अझ सकिन्छ भने उठेर काम गर्नु राम्रो ।
ब्रिटिश जर्नल अफ स्पोर्टस एण्ड मेडिसिनमा प्रकाशित एउटा रिपोर्टका अनुसार टेलिभिजनको हरेक एक घण्टाले तपाईको जीवनको २२ मिनेट कम गरिदिनेछ । अर्थात तपाई औषतः हरेक दिन ६ घण्टा टेलिभिजन हेर्नु हुन्छ भने तपाईको जीवनबाट पाँच वर्ष कम हुनेछ ।
मानिसका लागि कसैसँग रहनु, कसैसँग कुराकानी गर्नु जरुरी छ । केही व्यक्ति तनावबाट टाढा रहनका लागि एक्लै बस्न रुचाउँछन् । तर, वास्तावमा उनीहरु आफू स्वयमलाई संसारको सुखबाट बञ्चित गरिरहेका हुन्छन् । एक्लोपनले मानिसको उमेर घटाउने काम गर्दछ ।
१५ देशमा ४० वर्षसम्म दुई करोड जनामा गरिएको एउटा शोधका अनुसार बेरोजगार मानिसको अचानक मृत्युको खतरा रोजगारवालाको तुलनामा ६३ प्रतिशत बढी हुने गर्दछ ।
शरीरका लागि व्यायम जरुरी छ ।तर मात्र शौखका लाग आवश्यकताभन्दा बढी व्यायम गर्नु हानिकारक पनि छ । चिकित्सक वा शारीरिक प्रशिक्षकको सल्लाहअनुसार व्यायम गर्ने हो भने पनि आयु लम्ब्याउन सकिनेछ ।
Previous post: श्रीमानको वीर्यले अस्पताल पुराएपछि…..
Next post: यसरी भयो एमाले–माओवादी एकताको ऐतिहासिक घोषणा
मायाको शब्दकोषः ल विश्वका १९ भाषामा आई लभ यु यसरी भन्नुस्
यस्तो अचम्मको हुन्छ महिलाहरूको सेक्स चाहना
के मानिसहरु सोच्नेभन्दा बढी हाँस्छन् ? यस्तो रहेछ हाँस्नुको कारण
यी चार रोगका लक्षण नदेखिए पनि कानले दिन्छ यस्तो संकेत